Degmada Kaxda oo markii ugu horaysay laga hir galiyay garoon uu yaalo caws mac mal ah+SAIRRO – Gool FM
Degmada Kaxda oo markii ugu horaysay laga hir galiyay garoon uu yaalo caws mac mal ah+SAIRRO
jilacow September 12, 2017
(Muqdisho) 12 Sebt 2017.Guul weyn ayaa u soo hoyatay degmada kaxda sida uu qabo guddoomiyaha degmadaas Maxamed Ismaaciil, kaddib markii laga hir galiyay garoon uu yaalo Caws mac mal ah.
Garoonkaan ayaa lagu magacaabaa Jillibeey, waxa uuna ku yaalo waaxda Abaadir degmada kaxda ee gobolka Banaadir.
Masuuliyiin kala duwan ayaa kasoo qeyb gashay furitaanka garoonkani waxaana qeyb ka ahaa guddoomiyaha degmada Kaxda mudane Maxamed Ismaaciil,xoghayaha degmada, guddoomiyaha ururka haweenka kaxda,maamulka Isboortiga degmada iyo marti sharaf goobjoog ahaa furitaanka garoonka cusub.
Nuur Shukri oo ah guddoomiyaha Isboortiga Degmada kaxda ayaa u mahad celiyay milkiilaha garoonka Cali Jilibeey,kaasoo u suura galiyay in dhalinta degmada ay helaan garoon uu yaalo caws Mac mal ah.
Guddoomiyaha degmada Maxamed Ismaaciil oo isna goobta ka hadlay ayaa carabka ku dhuftay in furitaanka garoonka cusub ay tahay guul u soo hoyotay degmada, isagoo ugu dambeyn xariga ka jaray.
Milkiilaha garoonka Cali Jilibeey ayaa isna sheegay in furitaanka garoonkaan uu ka dambeeyay kaddib codsi ka yimid dhalinyarada ku sugan degmada oo ku aadan in ay helaan garoon uu yaalo caws Mac mal ah.
Sikastaba waa garoonkii ugu horeeyay ee uu yaalo caws mac mal ah kaasoo laga furay degmada kaxda ee gobolka Banaadir.
“Zidane wuxuu ii sheegay inaan ugu shidanahay inta Bidixda ku ciyaarta tan iyo Lionel Messi.”.
SAWIRRO: Kooxda AC Milan oo maanta soo bandhigtay sawirka xilli-ciyaareedkan 2017-18 + Muuqaal